PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-08-26 - ITHUBA KWABASAFUFUSA
AYANDA amathuba okuziveza kubaculi abasafufusa njengoba kwimoshito Music Conference & Exhibition nonyaka kukhona ozohlomula ngesamba esilinganiselwa ngaphezu kuka-r100 000.
Lolu xhaso luzokwehlisa umthwalo amaciko abhekana nawo njengoba imvamisa aye aswele izimali zokuqopha umculo, ama-video nokusabalalisa umsebenzi wawo. Inselelo yokushoda ngemali kwamaciko afufusayo yiyo eyenza amanye aze aphonse ithawula.
Ukuze amaciko azibeke ethubeni lokuthola lolu xhaso kuzomele athenge amathikithi okwethamela le ngqungquthela eqala mhlaka-6 kuya ziwu-8 kumandulo (September) enewtown Music Factory nebiyaziwa ngebassline enewtown egoli.
Kudingeka ukuba wona amaciko azongenela afike mhlaka-3 ukuyokhangisa ngama- demo azenzele wona. Kuzobe sekuhlungwa abawu-20 kulawo maciko, kuthi mhlaka-7 kuzomenyezelwa onqobile kulo mncintiswano obizwa ngemtv Base Demo.
Abagqugquzeli baqinisekise ukuthi i- video yalowo onqobile izodlalwa eziteshini zabaxhasi okuyimtv Base NEBET. Kule ngqungquthela kuba khona zonke izinhlaka ezisebenza ngomculo, kanye nababambe iqhaza kule mboni.
Umonde Twala onguvice President weviacom International Media Networks Africa uthi bakuthokozele ukuba yingxenye yale ngqungquthela nonyaka.
“Umsebenzi WEMTV Base NEBET wukukhulisa ithalente elisha e-afrika yonkana, bese sibanika izigcawu zokuzikhangisa babonwe,” kusho yena. Mhlaka-5 kuzoba ne- gala dinner la kuzothulwa khona izinhlelo zanonyaka ngokusemthethweni.
ISITHOMBE NGABE: MOSHITO
UCANDY “Tsamandebele” Mokoena kwimoshito Music Conference &amp; Exhibition ngonyaka odlule.